Ama-Searchmetrics: Ipulatifomu ye-SEO yebhizinisi, eqhutshwa ngedatha | Martech Zone
Kunezinhlobo eziningi Amathuluzi we-SEO itholakala ngokugcwala okuningi emakethe njalo ngenyanga. Inkinga ngobuningi bala mathuluzi ukuthi agxila kumamethrikhi okungenzeka ukuthi abebalulekile eminyakeni eyedlule, kepha angasasebenzi. I-Searchmetrics ibhizinisi, eliqhutshwa yidatha yesikhulumi se-SEO esiqhubeka nokuvela futhi silethe imiphumela kumakhasimende aso - emhlabeni jikelele.
Izinjini zokusesha zanamuhla zikhomba futhi zibala iWeb ekhula njalo ngokushesha okukhulu nangokunemba kunangaphambili. Baguqukile ukulwa nokugaxekile kweWebhu nokufakwa kwamagama asemqoka. Futhi baguquke ukuze bathuthukise imiphumela yenjini yokusesha ngokususelwe kudivayisi esetshenzisiwe kanye nendawo yomsebenzisi. Izinjini zokusesha manje sezibeka phambili amasu wokuqukethwe afanele kakhulu aqhuba ukubandakanyeka.
Ngenxa yalokho, ukusebenza kosesho kuhambisana eduze nokusebenza kokuqukethwe kuzo zonke iziteshi, kusuka kumawebhusayithi kuya ekuxhumaneni nomphakathi. Eqinisweni, lezi zinguquko zidale i-paradigm yosesho entsha ngokuphelele - hhayi ukusesha kuphela kepha ukusesha nokwenza kahle okuqukethwe. Futhi njengoba izinjini zokusesha zibeke uthango eningi lemininingwane yazo, amapulatifomu e-SEO afuna ukubikezela nokuhlola ukusebenza kokuqukethwe adinga ukuletha idatha yawo ecebile ephathini. Namathuluzi anamandla amakhulu okuyihlaziya.
I-Searchmetrics Suite wakhe i-database yomlando ehlanganisa iminyaka engu-7 nezingcezu zolwazi ezingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama-250, kufaka phakathi amazinga asemqoka, amagama okusesha, izixhumanisi zomphakathi kanye nama-backlinks. Esikhundleni sokuncika kudatha yomuntu wesithathu, amasheya abo wedatha acebile anika amandla # 1 search yomhlaba nokusebenza kokuqukethwe platform. Kubandakanya imininingwane yomhlaba, yeselula neyasendaweni ehlanganisa ukusesha okuphilayo nokukhokhelwayo, kanye nemithombo yezokuxhumana. I-Searchmetrics inokufinyelela okukhulu emhlabeni wonke kwanoma iyiphi ipulatifomu ye-SEO, kukhasa iWebhu njalo emazweni angaphezu kwe-134.
Izici ezibalulekile ze-Searchmetrics Suite
Ukusebenza kokuqukethwe - Ama-Searchmetrics athola ukuthi izimbangi zokuqukethwe zisebenzisa ukuheha abathengi bakho. Futhi ikukhombisa ukuthi ungakha kanjani isabelo semakethe— ngamakhasi afanele futhi afaka umoya afika ahehe labo okungenzeka bathenge.
I-SEO yeselula - Ngama-Searchmetrics, ungafinyelela izithameli zakho zeselula, ngezinga lemboni elinamandla kakhulu futhi elinembile lomkhakha kanye nokuqonda kwethrafikhi. Isilinganiso se-Searchmetrics Mobile Visibility siyisibonisi esihamba phambili emakethe sobukhona beselula online.
Ukusebenziseka Kwezindawo Okusabekayo - I-Searchmetrics Suite site optimization yenza ukukhasa okujulile ukukhomba izingqinamba zesakhiwo namaphutha, futhi ikusiza ukubeka phambili okufanele ulungise kuqala. Ungaqhathanisa ukusebenza kwedeskithophu neselula nama-ejenti wethu wedeskithophu ahlukile kanye nama-ejenti weselula.
Ukubika kwe-ROI kanye namaDeshibhodi - Nge-Searchmetrics Suite, ungahlaziya, ulinganise, ubikezele futhi ubike kuyo yonke imikhankaso yakho yokumaketha yedijithali, kufaka phakathi ukusesha, okuqukethwe, i-PPC kanye nomphakathi.
Amaphuzu wokubonakala - Kukhulunywa ngemininingwane emikhulu yokusesha emhlabeni, i-Searchmetrics Scale Visibility Score kanye nokubonakala kweselula ngokuthembekile nangokunembile ukukala ubukhulu bedeskithophu yakho nobukhona be-inthanethi obukhona. Lezi zikolo zisebenzisa ivolumu yosesho, amamodeli wokuchofoza ashukumisayo ashukumisayo nama-algorithm wokufunda komshini ukubala amathuba okuchofoza ngaphakathi kwemiphumela yosesho.
I-Searchmetrics Suite yipulatifomu ehamba phambili yokuseshwa kwebhizinisi kanye nokuqukethwe kokuqukethwe, okufaka iminyaka eyi-10 yokwenziwa komkhiqizo, eholwa enye yama-SEO aphezulu ayi-10 emhlabeni, UMarcus Tober. Ngabasebenzisi abacishe babe ngu-100,000 emhlabeni jikelele, i-Searchmetrics Suite iyipulatifomu yokusesha yebhizinisi neyokulungiselela okuqukethwe engu- # 1 yokuzikhethela ye-eBay, okuyisisekelo, iVolvo, iT-Mobile, i-Nokia, iTripadvisor nokuningi.
Funda Kabanzi Mayelana ne-Searchmetrics
I-Searchmetrics ihambisa i-SEO yebhizinisi kanye nokuhlaziywa kokumaketha okuqukethwe, izincomo, ukubikezela nokubika kwezinkampani ezifuna abathengi abangaba khona ukuthi zibathole ngokushesha. Kusho ukuthi amathemba namakhasimende achitha isikhathi esincane esesha nokuthenga isikhathi esithe xaxa. Bayibiza nokwenza kahle kwesipiliyoni sosesho.
Ukudalula: Lokhu okuthunyelwe kuxhaswe ngokuqukethwe nge- Thola Ithonya Lakho.
Tags: ukwenziwa kokuqukethweidatha eqhutshwa idathaibhizinisi seoipulatifomu yebhizinisi seomarcus tobermobile seo ukuhlaziywaUkusebenziseka kalula kwesayithiIzindlela zokucingaama-dashboardslokho kubikaukukhasa kwesizaamaphuzu wokubonakala